गण्डकी विकास बैंकको १४ दशमलव २० प्रतिशत लाभांश स्वीकृत – Arthik Awaj
गण्डकी विकास बैंकको १४ दशमलव २० प्रतिशत लाभांश स्वीकृत
By आर्थिक आवाज २०७५ पुष ३ गते मंगलवार १२:३४ मा प्रकाशित
पोखरा, ३ पुस । गण्डकी विकास बैंकको संचित मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको १४ दशमलव २० प्रतिशत प्रस्तावित नगद लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको छ । सञ्चालक समितिबाट निर्णय भई नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतीका लागि पेश भएको आ.व. २०७४÷०७५ सम्मको नगद लाभांश स्वीकृत भएको हो ।
नगद लाभांश बैंकको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि बितरण हुनेछ । बैंकले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै शेयरधनीहरुलाई उच्च प्रतिफल प्रदान गर्दै आएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
बैंकले सात वटै प्रदेश, हिमाल पहाड तराई, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म र ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रमा शाखा सञ्जाल विस्तार गरी वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले आकर्षक व्याजदरमा निक्षेप योजना, सहज र सरल रुपमा कर्जा योजनाको साथमा एबिबिएस, एटिएम, सिआश्वा, आइपिएस, मोबाइल बैंकिङ सेवा, लकर सेवा, सुन धितोमा कर्जा सुविधा, रेमिट्यान्स सेवा, प्रधान कार्यालय लगायत केही शाखाहरुबाट ३६५ दिने बैकिङ सेवा तथा सन्ध्याकालीन सेवा पनि प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विपन्नवर्ग कर्जा तथा समूहमा आवद्घ लघुवित्त कर्जा पनि प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले आ.व. २०७५÷७६ को प्रथम त्रैमासमा संचालन मुनाफा रु. १५ करोड ३० लाख आर्जन गर्न सफल भएको थियो भने सोही अवधीसम्म निक्षेप रु. २३ अर्ब ७२ करोड र कर्जा तर्फ रु.२१ अर्ब २४ करोड पु¥याएको छ । बैंकको निष्कृय कर्जाको मात्रा अत्यन्तै न्यून रहेको बैंकले जनाएको छ ।